Akụkọ - Neikeng slippers na-amalite mkpọsa mgbasa
Neikeng slippers na-amalite mgbasa ozi nkewa
Otu ụzọ obere slippers, na-ebugharị nnukwu ụlọ ọrụ. Slippers bụ ụlọ ọrụ ogidi ọdịnala na Jinjiang Nei Keng, na azụmaahịa mba ofesi kwalitere mmepe nke ụlọ ọrụ slippers. Agbanyeghị, n'afọ a, ọrịa COVID-19 metụtara, ụlọ ọrụ egbuola oge ịmaliteghachi ọrụ na mmepụta, belatara iwu azụmaahịa mba ofesi nke ukwuu, mbelata ikike mmepụta, na ụkọ ọrụ… Ndị a na-aghọ nsogbu nke ụlọ ọrụ slipper ga-eche ihu.
Industrylọ ọrụ slippers Jinjiang nọ n'okpuru nrụgide na-egosipụta onwe ya, mana ọ bụghị na-enweghị ohere. Kpamkpam, mepee ọwa ọhụrụ nke mgbasa ozi na-ebi ndụ n'ịntanetị na ire ngwaahịa, gwuo ala n'ime ahịa ụlọ, ma zụlite ndị ọkwọ ụgbọ ala ọhụrụ; N'ime, nọgide na-amụba nyocha na mbọ mmepe, njikwa ọnụ ahịa na arụmọrụ.
Ugbu a, chekwaa gị nwere mmetụta dị mma, mana site na ntiwapụ ahụ, ka anyị ga-eche ihu maka ụlọ ọrụ nwere akụkọ ihe mere eme nke ihe karịrị afọ 40 mmepe, ya n'onwe ya ka enweghị ikike mgbochi ihe egwu siri ike, slippers dum. ụlọ ọrụ usoro bụ ka ezughị okè, na-achọ a elu àgwà mmepe mkpa nke Jinjiang slippers na nnọgidesi ike nke enterprise.
Nrụgide okpukpu abụọ
N'ezie, ọrịa na-efe efe, na mmetụta nke ụlọ ọrụ azụmaahịa mba ofesi, bụ nke zuru ụwa ọnụ. Site na azụmaahịa mba ofesi - ụlọ ọrụ slippers Jinjiang dabere abụghị ihe dị iche.
Onye dị mkpa na-ahụ maka ụlọ ọrụ jụrụ ịkpọ aha slippers, gwara ndị nta akụkọ na ụlọ ọrụ ahụ ga-abụ dị ka ebe dị mkpa nke ahịa ahia ahia mba ọzọ dị ka ndịda ọwụwa anyanwụ Eshia, azụmahịa ahụ emetụtala, azụmahịa nke ụlọ ọrụ ahụ bụ ihe dịka 20% dị ala karịa. afọ gara aga, "o kwesịrị kwuru na dị ka ogologo dị ka ndị mba ọzọ ahia, azụmahịa iwu na-emetụta, size nke emetụtara mpaghara Enterprise layout na isi mba ọzọ ahia ahịa, Na ahịa asọmpi nke ha ngwaahịa, dị ka price, ngwaahịa. àgwà na ndị ọzọ." Onye na-ahụ maka ụlọ ọrụ ahụ kwuru.
Maka ọtụtụ ụlọ ọrụ slippers, ịtụ nsogbu bụ nsogbu siri ike ha ga-eche ihu; Na iji dịtụ mma maka enterprise, mkpara ntụgharị ọnụego enweghị ike ileghara.
Test mmiri na ọkụ eletrik ọwa azụmahịa
N'okpuru nsogbu ahụ, ndị slippers olulu malitere ịchọ ụzọ ha ga-esi pụọ na gburugburu gburugburu n'ọtụtụ akụkụ, ma tinye ya na mbụ, dị na njedebe ọwa nke ike. Ebe ọ bụ na afọ a, Jinjiang na-ebi ndụ agbasa ozi n'ikuku na-ewu ewu na niile ụlọ ọrụ, ọzọ na ndị ọzọ olulu slippers ụlọ ọrụ na-"na-anwale mmiri" online ndụ agbasa ozi n'ikuku na ngwongwo, họrọ "mba ọzọ ahia ka ụlọ ahịa", ọzọ azụmahịa na-elekwasị anya na anụ ụlọ, ịchọ. ohere azụmahịa karịa.
N'ọnwa Mee, a na-enwe mgbasa ozi ndụ pụrụ iche nke "Isi Iyi Ezi Ngwaahịa emere na Jinjiang" n'ime olulu dị n'ime nke obodo a ma ama nke slippers ndị China. Ụlọ ọrụ slippers dị n'ime olulu pụtara mkpokọta n'elu ikpo okwu mgbasa ozi na-ebi ndụ, onye na-ahụ maka ụlọ ọrụ ahụ na-eme ka ọ dị ka arịlịka ama ama webụ ibu ngwongwo maka netizens. Ọ dị mma ịkọwa na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ụlọ ọrụ 21 ka edobere na ntọala mgbasa ozi ndụ nke Jinjiang Slipper Union, na-enye ohere maka ụlọ ọrụ, iwu ngwanrọ na nyiwe ngwaike maka ụlọ ọrụ, yana inye nkuzi ọzụzụ maka ndị ọrụ arịlịka nke ụlọ ọrụ slipper.
Maka nhazi nke mpaghara e-azụmahịa, ụfọdụ ndị nọ na ụlọ ọrụ ahụ gosikwara na, ka emechara, mgbasa ozi ndụ bụ uru dị mkpirikpi, na otu esi eme ka mmetụta dị otú ahụ na-adịgide adịgide kwesịrị ka ụlọ ọrụ tụlee.
R&D na-aga n'ihu na ihe ọhụrụ
China plastic Huang Weibing, director nke Association alaka alaka nke plastic akpụkpọ ụkwụ, na-arụtụ aka na na-aga n'ihu ọhụrụ bụ ihe a na-apụghị izere ezere, ndị na-azụ ahịa ugbu a karịa n'oge gara aga, a na-enye ihe dị arọ karịa àgwà ngwaahịa anyị na njirimara ọrụ ngwaahịa, "ngwaahịa bụ ntọala nke ngwaahịa anyị. ihe niile, nke a na-apụghị iche na nyocha na mmepe na mmepụta ngwaahịa, na-atụ anya na ụlọ ọrụ Jinjiang slippers na-amụba ego ya na nchọpụta ngwaahịa na mmepe, site na ihe ọhụrụ na-arụ ọrụ, nkà na ụzụ ọhụrụ na ihe ọhụrụ, mee ka uru dị n'ime ya gbakwunyere nke ngwaahịa ahụ. "
Nnyocha na-aga n'ihu na mmepụta ihe ọhụrụ, na-akwalite asọmpi ahịa ngwaahịa n'otu oge ahụ, na-achịkwa arụmọrụ a aghọwokwa omume na-agbanwe agbanwe nke ọtụtụ ụlọ ọrụ slipper.
Area linkage ma ọ bụ slipper mmepe nzọụkwụ ọzọ
Site na ọrịa na-efe efe, ma ka anyị ga-eche ihu ruo Jinjiang slippers ụlọ ọrụ ka enweghị ike ike iguzogide ihe ize ndụ nke nsogbu a. N'akụkụ a, ndị mmadụ na ụlọ ọrụ na-arụtụ aka na ọ bụ ntụziaka dị mma maka ụlọ ọrụ ịmepụta ọnụ na ịbawanye njikọ mpaghara na mpaghara mmepụta ihe.
Na China plastic Huang Weibing, director nke Association alaka alaka nke plastic akpụkpọ ụkwụ, slippers na China abụghị a nnukwu asọmpi uru na mba ahịa, mgbe niile, Brazil, Russia na mba ndị ọzọ na-ama na-etinye slippers ime nnọọ oké, na-egosi ọbụna ndị okomoko ika plastic slippers, a ụzọ slippers nwere ike na-ere n'ihi na puku kwuru puku dollar "kristal", "Chinese slippers ka na n'etiti nso larịị ukwuu n'ime, homogeneity mpi, A ka nwere ọtụtụ ụlọ maka ibu, gụnyere ụdị, ọhụrụ ihe. ngwa na ihe ndị ọzọ."
Huang Weibing kwuru na mgbe 40 afọ nke mmepe, olulu slippers ji nwayọọ nwayọọ na-eje ije nke obi ụlọ ọrụ mode nke mmepụta, ka jikọrọ ọnụ na nkọwapụta, si imewe, mmepe, ebu mmepụta, akụrụngwa ọkọnọ na mmepụta, nkwakọ, ahịa, azụmahịa, lọjistik na ndị ọzọ na nke ọ bụla njikọ zuru ezu ụlọ ọrụ yinye, zuru ezu ọkachamara nkewa nke ọrụ doro anya, achikota ikike bụ pụtara ìhè, ọnụ ọgụgụ na-agbasa n'akwụsịghị akwụsị, Ma ọ na-eche ihu otu nsogbu dị ka ndị ọzọ slippers amị ebe na China, dị ka homogenization. asọmpi, agha ọnụahịa, ịkwanye ebu, ọgba aghara usoro ọrụ na ihe ndị ọzọ. "Ọ bụ ezi ntụziaka maka ụlọ ọrụ ịzụlite ọnụ na mụbaa mpaghara njikọ nke na-emepụta ebe."
"Ntọala nke Jinjiang Slipper Alliance, na site na Jinjiang Slipper Alliance na dị iche iche nyiwe iji nweta atụmatụ imekọ ihe ọnụ, iji nyere ụlọ ọrụ jikọọ ọzọ ego, na-na Jinjiang akpụkpọ ụkwụ Expo, Canton Fair pụrụ iche guzobe a slipper Ụlọ Nzukọ, ọtụtụ ụlọ ọrụ sonyeere ihe ngosi, bịanyere aka n'akwụkwọ iwu, ọnụ ọgụgụ nke ndị ọbịa na ọnụ ọgụgụ nke azụmahịa erutela ndekọ dị elu.Onye nta akụkọ na-aghọta site na njikọ njikọ jinjiang slippers, n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ olulu slippers site na imekọ ihe ọnụ na mahadum na kọleji, ụlọ ọrụ nyocha sayensị, nkà na ụzụ, ngwá ọrụ, ndị ọrụ. , nnyocha na mmepe akụkụ nke ihe ịga nke ọma n'akwụsịghị akwụsị, kpọkwara jinjiang zuo, nkedo Shi Zhiku pulse slippers ụlọ ọrụ ugbu a ọnọdụ, na-ewu ala ọdụ ụgbọ mmiri nke ohere, kọleji ụmụ akwụkwọ ọsụ ụzọ ogige, "ụlọ akwụkwọ" na ndị ọzọ na pesonel ọzụzụ n'elu ikpo okwu, Na-adabere na. mahadum dị mkpa ka ịtọlite ​​​​e-commerce talent incubation base, iji nyere ndị slippers aka ịbanye na-ebili iji gbasaa ọwa ahịa ahịa e-commerce. Site na mbọ niile nke ndị slipper, Neikeng emeriela aha nsọpụrụ nke "Shoes Capital of China · Famous Slipper Town".
Mgbe na-agba ọsọ-na n'ime afọ ole na ole gara aga, mmepe nlereanya nke otu e kwusiri ike site na ọtụtụ slippers ụlọ ọrụ, "nwere ike doro anya na mmepe nke ụlọ ọrụ bụ ndị ọzọ benign, ajọ asọmpi n'etiti ụlọ ọrụ na-ebelata, site na imekọ ihe ọnụ n'etiti n'etiti. Gọọmenti na ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ, docking ka ndị ọzọ dị irè akụrụngwa na-enyere aka mmepe nke ụlọ ọrụ. Jinjiang neikeng na-agbasawanye na slipper ụlọ ọrụ site na mmepe nke otu, na mgbe niile na-eme ka ewu ewu, aha na iguzosi ike n'ihe nke slipper ngwaahịa."
Site na "ndị ọha na-amaghị" na "blockbuster", ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-agbasawanye, olulu olulu n'ọdịnihu ka esi etolite? Pit na obodo nwere atụmatụ, chọrọ ịrụ ọrụ nke jinjiang slippers Alliance edu ndú, na mmejuputa iwu nke "isii" slippers ụlọ ọrụ nkwalite oru ngo, site na-ewu ụlọ ọrụ ogige, bụ ọkachamara ahịa, a Internet ikpo okwu, na-akwalite a ogbe nke. sayensị nnyocha isi, a ogbe nke na-eduga ụlọ ọrụ, a ọnụ ọgụgụ nke ika-aha ngwaahịa, ngwa ngwa dum yinye, dum usoro kwalite, "Chinese ama obodo nke slippers" ika agha ".
Oge nzipu: Jun-03-2021